Would you travel back in time with us?
"Mingala Collection" (မင်္ဂလာ) presented by Nhoo Matthews Atelier
We recreatedaromantic mood of the classical painting era when proper ladies sit for the portrait painting in the perfect posture and ravishing dresses. In this collection, the traditional Burmese “Acheik” delicate waving pattern silk fabric fused with our signature lace embroidery is transformed intoaromantic “East meets West” collection. We extend the South East Asian tradition for the modern day brides.
"มิงกาลา คอลเลคชั่น" ได้แรงบันดาลใจมาจากความโดดเด่นและอ่อนช้อยของผ้าลายคลื่น "อะเช่ก" ของประเทศพม่า นำมาผสมผสานกับเอกลักษณ์การปักลูกไม้ในแบบของห้องเสื้อ Nhoo Matthews Atelier และนี่เป็นส่วนหนึ่งของ East Couture Collection ที่ห้องเสื้อของเราได้นำเสนอเพื่อเจ้าสาวที่มองหาชุดแต่งงานที่มีความโมเดิร์นแต่ยังคงเอกลักษณ์และประเพณีนิยมในประเทศฝั่งเอเชีย
ภาพถ่ายคอลเลคชั่นถ่ายทอดโดย คุณสุรชัย แสงสุวรรณ
Model: Alina Shuliak from Zoom-Evrika Model Management
Designer and Art Direction: Nhoo Matthews
“နူး မက်သယူးစ် အတဲလ်လီ” အထည်လုပ်ငန်းက ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် တင်ဆက်လိုက်တာကတော့ “မင်္ဂလာစုစည်းမှု” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အထည်ပုံစံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပိုးချည်တွဲမြန်မာ့ရိုးရာ “အချိတ်”ရက်လုပ်မှုပုံစံကို ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဇာပန်းထိုး အတတ်ပညာနှင့် ပေါင်းစပ်လိုက်ပြီး“ အရှေ့နှင့်အနောက်တို့ ဆုံစည်းရာ” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အထည်ဆန်းတစ်မျိုးအဖြစ် အသွင်ပြောင်း ဖန်တီးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ကာလ ခေတ်မီသတို့သမီးများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့က အရှေ့တောင်အာရှရိုးရာယဉ်ကျေးမှု
အရှေ့တိုင်းအထည်ဆန်းသစ်မှု ဆိုတာဟာဆိုရင် အာရှရဲ့ ရိုးရာမင်္ဂလာဆောင် အခမ်းအနားတွေမှာရိုးရာပုံစံနှင့် ခေတ်မှီဆန်းသစ်မှုကို ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဖက်ရှင်ပုံစံတွေ ကိုမှ ရှာဖွေ ချင်သူ သတို့သမီးတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတော့ ရက်လုပ်ထားတဲ့ မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားသုံး အထည်ပုံစံတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။